Global Voices teny Malagasy · 26 Marsa 2019
26 Marsa 2019
Tantara tamin'ny 26 Marsa 2019
Amerika Latina 26 Marsa 2019
Taorian'ireo ora maro nanginan'ireo manampahefana, voamarina fa nosamborin'ny Sampam-pitsikilovana avy amin'ny polisy Bolivariàna(SEBIN) i Díaz.
Fiasa Vaovao: Lisitra Fanamarinana Taorian'ny Namoahana ny Lahatsoratra!
Mediam-bahoaka 26 Marsa 2019
Lahatsoratra matselaka ity mba hanehoana ny fomba fiasa vaovao nampiana tao amin'ireo tranonkala GV mampiasa WordPress: Fankatoavana Lahatsoratra! Jereo ny fomba entin'ilay rafitra vaovao hiantoka ny hahatsara kokoa ireo fomba fikirakiràna lahatsoratra.
Mbola tazonina hatrany ilay Emirati mpikatroka na dia efa roa taona aza izay no nahavitany ny saziny
Nosamborina noho ny antso hanafahana ireo gadra noho ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Emirà i Al-Najjar.
Fantaro i Israel Quic, mandray ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 25-31 marsa
Antsafa 26 Marsa 2019
Andao hojerentsika bebe kokoa ny momba an'i Israel Quic, ilay hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 25-31 marsa 2019 ao amin'ny fanentanana media sosialy mifantoka amin'ny fimaroana an-tserasera.
Maro zava-mampanahy amin'ny lalàna Indiana misahana ny vaovao Ara-teknolojia nivoaka taona 2011
India 26 Marsa 2019
Manaraka ny dian'i Shina ve i India eo amin'ny lafiny votoatin-tambajotra foronin'ireo mpisera? Maro no hamaly eny, noho ny famoahana ireo fitsipika ara-teknolojia amin'ny fampahalalam-baovao nivoaka taona 2011.
Shina: Ny aterineto ho toy ny kianjan'ny ady ideolojika
Shina 26 Marsa 2019
Nanao tatitra momba ny valan-dresaka an-tserasera amin'ny fampiharana ny lalàna nasionaly tamin'ny 4 Janoary 2010 ny Xinhua News Agency Outlook Weekly. Nitatitra ny Minisiteran'ny Filaminam-bahoaka nandritra ny valan-dresaka fa hanamafy ny fanaraha-maso ny Aterineto ny polisy.